ကြိုတင် မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးခြင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ကြိုတင် မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးခြင်း
ဗီဇပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုရှိတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက မိသားစုတွေ မှာ မျိုးရိုးရှိနေမှန်း ကြိုသိရှိခြင်း မရှိပဲ မွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် အယောက် ၅၅၀ မှာ တစ်ဦးဟာ သဘာဝအတိုင်း မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှုရှိသော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့ ကလေးကို မီးဖွားရတတ်ပါတယ်။
ကြိုတင်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးခြင်းက ဗီဇပိုင်းဆိုင်ရာကို တိကျမှုအနေနဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ စစ်ဆေးပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
စပ်လျဉ်းသောသတင်းအချက်အလက်များတိကျခြင်းဆေးကုထုံး | တိကျတဲ့ဆေးကုသထုံးဖြင့် ကင်ဆာကုသခြင်း | ကင်ဆာအကျိတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း
ပုံမှန်အတိုင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ ပထမဆုံးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို ၃လပတ်အချိန်မှာပြုလုပ်ပြီး ကလေးမှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိမရှိကို သိရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးမှာ ချို့ယွင်းချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက နောက်ထပ် စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်တဲ့လမ်းညွန်မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။
အခုခေတ်မှာတော့ ကြိုတင်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးတဲ့ နည်းစနစ်ဟာ ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ မျိုးရိုးဗီဇ ၆၀၀ ကျော်ကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ယွင်းမှု ၂၀၀ ကျော်ကို ရှာဖွေနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုလိုမျိုး ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေကို သိနိုင်နေပြီဆိုရင် အဲ့ဒီအဖြစ်ကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနည်းဟာ အသက်အရွယ်ကြီးမားနေတဲ့မိဘတွေအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ရုံသာမကပဲ အခြား ဗီဇချို့ယွင်းနိုင်ခြေရှိတဲ့သူတွေအတွက် အခုလိုကြိုတင်စစ်ဆေးမှုတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ သင့်ကိုဘာတွေဆက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အသက်ကြီးမှ လက်ထပ်ပြီး ကလေးရယူမယ့်သူတွေအနေနဲ့ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှုဖြစ်ဖို့ ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ဖွံဖြိုးမှုနှေးကွေးတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပြီး အသက် ၃၅ နှစ်အထက်မိခင်တွေအနေနဲ့ အယောက် ၃၅၀ မှာ ၁ ယောက်က အဆိုပါ ရောဂါဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ ဖခင်တွေကြောင့်လည်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိလာနိုင်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေမှာပါဖြစ်န်ိုင်တဲ့ မိဘတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာမပြသော်လည်းကလေးငယ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှု(၅)မျိုး
Thalassemia Syndrome: အခုရောဂါဟာ သွေးနီဥတွေရဲ့ ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ မိဘနှစ်ဦးစလုံးမှာ အဆိုပါ ရောဂါ ကို သယ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုရင် ကလေးငယ်မှာ ဖြစ်ပွားဖို့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီး တကယ်လို့ မိဘ ၂ ဦးလုံးမှာ ရောဂါရှိနေပြီဆိုရင် ကလေးငယ်မှာလည်း ၁၀၀ ရာနှုန်း ဖြစ်ပွားမှာကျိန်းသေပါတယ်။
SMA (Spinal Muscular Atrophy): အခုရောဂါလက္ခဏာကတော့ မိဘတွေကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ လူမျိုးမရွေးဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်အာရုံကြောတွေမှာ မော်တာနူရွန်လို့ခေါ်တဲ့ ဆဲလ်တွေမှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီး အာရုံကြောများ အားယုတ်လာစေပြီး ကြွက်သားတွေကိုပါ အားနည်းစေခြင်း ပိန်လှီစေခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
Cystic Fibrosis: Tဒီလက္ခဏာကတော့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း၊ အစာခြေဖျက်ခြင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ မျိုးပွားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါ ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိတော့ အမြစ်ပြတ်အောင် ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိသေးပဲ လူနာကို သက်သာအောင် နဲ့ ပိုပြီးကြာကြာနေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး နည်းပါးအောင်ပဲ ဆောင်ရွက်နိုင် သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Fragile X: အခုပြဿနာကတော့ ဦးနောက်ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့ လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ပိုပြီးတွေ့ရတတ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေ၊ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ အခြားသူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ အဆင်မပြေမှုတွေကို ကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြားအာရုံချို့ယွင်းမှုဒါကတော့ နားမကြားမှု၊ နားထိုင်းတာနဲ့ လုံးဝ အကြားအာရုံမရှိတော့တာတွေအထိ ပါဝင်ပြီးတော့ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ကလေးတွေရဲ့ အကြားအာရုံချို့တဲ့မှုတွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်နှလုံသားကိုနွေးထွေးမှုပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကား‘Wonder,’ မကြည့်ရသေးရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ “ Auggie” ဟာ “ Treacher Collins Syndrome” လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ နား၊ မျက်လုံး၊ ပါးရိုး နဲ့ မေးတဝိုက်မှာ ရှုံ့တွမှုတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရောဂါဟာ လူအယောက် ၅ သောင်းမှာ ၁ ယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရောဂါလက္ခဏာဟာ ဖခင်နဲ့ မိခင်မှာရှိတဲ့ ခရိုမိုစုန်းတွေရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်အဖြစ်များပြီးတော့ တခါတရံမှာသာ မိဘတွေမှာရှိတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နိုပ်ပါ။
အချို့သောအခြေအနေတွေမှာ လူနာတွေဟာ ဆွေးနွေးမှုကို ခံယူပြီး မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို တွေ့ရတယ်ဆိုရင် မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ ဆေးကုထုံးကျွမ်းကျင်တဲ့ OB/YGNs သားဖွါးမီးယပ် အထူးကု တွေက IVF အစီအစဉ်အတိုင်း တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဖွံဖြိုးစေမယ့်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို စတင်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာတဲ့ သန္ဓေသားကို ရရှိနိုင်အောင်လည်း နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းပိုများအောင် ကူညီပေးမှာပါ။ အခုနည်းစနစ်ဟာ သားအိမ်က သန္ဒေသားကိုလက်ခံဖို့ ကောင်းစွာဖွံဖြိုးပြီး မပြီးကို သန္ဒေသားကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ခင် စမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပြုလုပ်မှုကို သားအိမ်လက်ခံနိုင်စွမ်းစစ်ဆေးမှုဟုခေါ်ဆိုပါတယ်။ အခု စမ်းသပ်မှုတွေထဲမှာ Mitochondria ကိုစစ်ဆေးခြင်း သန္ဓေသားကို ကောင်းစွာအာဟာရပေးနိုင်တယ် တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ယန္တယားကို စမ်းသပ်တဲ့စနစ်တွေပါဝင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်စေတဲ့ အခွင့်အလမ်းကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်စေပါတယ်။
တကယ်လို့ မိခင်က အသက် ၃၅ နှစ်အထက်ရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပြီဆိုရင် သားဖွားမီးယပ်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရရှိပြီး ရက်သတ္တပတ် ၁၀ ပတ်အတွင်းမှာတင် သန္ဓေသားကျန်းမာမှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ သန္ဓေသားကို စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ မှားယွင်းဖတ်ရှုမှုကို တီဗွီ ဓါတ်မှန် စနစ်ရဲ့ တိုးတက်လာမှုနဲ့အတူ ၀.၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ချနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး တိကျမှုနှုန်းကလည်း ၉၉.၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိပဲနဲ့ မိခင်အတွက် စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ယူဆောင်ပေးလာနိုင်မှာပါ။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုအနေနဲ့လည်း အတိတ်မှာတုန်းက ဘယ်သူတွေက အန္တရာယ်ကို ကြုံနေရလည်းဆိုတာကို မြင်တွေ့မှသာ သိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ လူတိုင်းက မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု၊ မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာ ပြင်ဆင်မှုတွေကို ကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုလိုကြိုတင်ကာကွယ်ပေးမှုစနစ်တွေကို ဆောင်ရွက်လာတာ ၈ နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ရလဒ်ကောင်းတွေကိုပဲ ယူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လမစေ့မီးဖွားခြင်းကာကွယ်ရေးဆေးခန်းအကြောင်းလေ့လာလိုပါကဤနေရာတွင်နိုပ်ပါ။
စပ်လျဉ်းသောသတင်းအချက်အလက်များ တိကျခြင်းဆေးကုထုံး | တိကျတဲ့ဆေးကုသထုံးဖြင့် ကင်ဆာကုသခြင်း | ကင်ဆာအကျိတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း
Assoc. Prof. Boonsri Chanrachakul, M.D., PhD
Obstetrics And Gynaecology (Maternal And Fetal Medicine)
Head Doctor for Maternal-Fetal Medicine at Samitivej Sukhumvit Hospital
Obstetrics And Gynaecology (Reproductive Medicine)
Patama Promsonthi, M.D.
Samitivej ဆေးရုံကြီးတွင် ရက်ချိန်းယူရန် အောက်ပါပုံစံကို ကျေးဇူးပြု၍ဖြည့်ပေးပါ
မည်သည့်ဆေးရုံမဆိုSamitivej SukhumvitSamitivej SrinakarinSamitivej ThonburiSamitivej SrirachaSamitivej International Clinic
ရက်ချိန်းနေ့စွဲ − ဒုတိယဦးစားပေး
သင်၏ ဆေးရုံကဒ် နံပါတ်(HN) ကိုဖော်ပြပါ။